Midowga Ardayda Jaamacadda SIU oo hogaan cusub doortay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kulan ay iskugu yimaadeen xubno ka socday fasalada Jaamamacadda SIU oo ay ku dooranayeen hogaanka Midowga Ardayda SIU ayaa lagu qabtay xarunta Jaamacadda faraceeda KM4, iyadoo ay ka qeyb galeen Madaxda Jaamacadda, mas’uuliyiin kale iyo guddi loo xulay doorashada.
Ardayda ayaa waxa ay doorteen 7 xubnood oo ku tartamayay jagooyinka kala duwan ee Midowga Ardayda Jaamacadda SIU, kuwaasi oo kala ah guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, Xoghaye, Xariirka Dadweynaha, Maaliyadda iyo shaqada shaqaalaha.
Doorashada oo ahayd mid qarsoodi ah ayaa waxaa si habsami leh u waday guddiga doorashada oo ugu dambayntiina ku dhawaaqay xubnaha ku soo baxay doorashada.
Dr Cusmaan Faytaan gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa u sheegay warbaahinta in ay tahay maalin weyn oo dadku ku farxaan in ardayda Soomaaliyeed ay manta isdoortaan hogaan cusub, taasi oo ka dhigan in ay yhiin hogaan sameeyay isbedel tusaale wanaasgana u ah madaxda in la doorto.
Hormuudka Jaamacadda SIU Prof Yaxye Cali Ibraahim ayaa sheegay in ardayda Jaamacadda ay qayb muhiim ah ka yihiin hanaanka wax hogaamineed, waxa uu xusay in maanta ay si buuxda ula wareegayaan kursiga ay ku leeyihiin Jaamacadda, maadaama kuwii ka horeeyay uu waqtiga ka dhaamaday.
Prof Yaxye Cali Ibraahim ayaa kula dar daarmay hogaanka ardayda Jaamacadda ay doorteen looga baahanyahay in ay noqdaan wakiilo baadi gooba tacliinta sare, ayna buuxiyaan gaabka waxbarsho “Waxaadtihiin hogaanka looga fadhiyo in aad horseed u noqtaan tacliinta sare ee Soomaaliya, waxaana mas’uuliyad idinka saaran in aad dar dargelisaan howlaha la idin igmaday”
Guddoomiyaha La doortay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanahay waxa uuna intaasi ku daray in uu dar dargelin doono waajibaadka saeran ee loo idmaday.
Hogaanka cusub ee la doortay ayaa bedeli doonaa hogaankii muddada sanadka ah soo shaqaynayay ee Jaamacadda SIU, waxaana horyaalla howlo adag oo looga fadhiyo inay wax badan ka qabtaan.